Raheem Sterling oo looga shakiyey Korona Fayras kaddib markii uu ka qeyb-galay xaflad ka dhacday Dalka Jamaica… (Maxay tahay natiijada ka soo baxday baaritaankii lagu sameeyey?) – Gool FM
Raheem Sterling oo looga shakiyey Korona Fayras kaddib markii uu ka qeyb-galay xaflad ka dhacday Dalka Jamaica… (Maxay tahay natiijada ka soo baxday baaritaankii lagu sameeyey?)
(Manchester) 25 Agoosto 2020. Ciyaaryahanka kooxda kubadda cagta Manchester City ee Raheem Sterling ayaa looga shakiyey inuu haleelay faafaha Korona Fayras, kaddib markii uu ka qeyb-galay xaflad lagu qabtay dalka Jamaica.
Raheem Sterling ayaa Jimcihii ka qeyb-galay xaflad uu ku casuumay orodyadahan Usain Bolt, kaasoo ay asal ahaan ka soo wadajeedaan Waddanka Jamaica.
Ninka siddeeda goor haysta billadda Olympic gold medal ee Bolt ayaa shaaciyey magacyada dadkii caanka ahaa ee uu ku casuumay xafladda dhalashadiisa 34-aad, taaso dalka Jamaica lagu qabtay, waxaana ka soo dhex muuqday liiskaas Sterling.
Dad meelo kala duwan ka yimid ayay kulmisay xafladdaas, iyadoo sidoo kale la arkayey Raheem Sterling oo garbaha haysta Bolt iyo qaar ka mid ah asaxaabtii xalafaddaasi ka soo qeyb-galay.
Si kastaba ha noqotee, baaritaankii ugu dambeeyey ee lagu sameeyey Raheem Sterling ayaa lagu ogaaday inuusan ku dhicin caabuqa Korona Fayras, iyadoo inta badan dadkii ka qeyb-galay xafladdaasi karaantiil la geliyey marka ay dalalkooda ku laabteen.
Yeelkeede, warkan waxa uu yimid xilli maanta uu ku dhawaaqday macallin Southgate liiska xiddigaha xulka qaranka England uga qeyb galaya kulammada UEFA Nations League bisha soo socota, waana lagu soo daray liiska oo waa uu ka dhex muuqdaa haatan.
RASMI: Liiska xiddigaha xulka qaranka England uga qeyb-galaya UEFA Nations League oo la shaaciyey... (Phil Foden iyo Greenwood oo markii ugu horreysay loo wacay & Harry Maguire oo...)